Raha efa nanolorana azy ho amin'ny diany hamonjy Pet Ireto misy vitsivitsy hamantatra izany, toro-hevitra sy tetika mba hanampy anao eny lalanao!
Raha te kely fitiavana tsy maintsy manome kely ny fitiavana! – Spending the time to send your friends lives every time you log in (na nanosika hanao izany) no fomba tsara indrindra mba hahazoana antoka ny ny mailbox dia nanenika amin'ny adala fahavaratra mahasoa ny fitiavana. Omeo kely mahazo kely!
Aza manao ny zavatra rehetra ianao nilaza! – ny marina tsy manan-danja ihany koa ny fun..but amin'ity tranga ity, rehefa hanokatra ny lalao ny biby resabe iny ianao matetika no nihaona tamin'ny lamba nahatonga anao mba handefa fiainana, hetsika na ny fanasana ny namana…AZA mandefa fanasana, ho zava-dehibe, raha tsy misy olona milalao ny ankehitriny izy ireo dont te-ho, na izany na dia miaina ambany vatolampy. Alefaso fiainana sy ny hetsika ho namana izay efa milalao, fa avy fandefasana fanasana fotsiny dokam-barotra ho an'ny mpanjaka ary mahatezitra be dia be ny olona, indrindra fa ireo izay tsy savvy teknolojia loatra raha mandray matetika fampahafantarana rehetra ho mailaka loatra.
Ampiasao ny hetsika! – Tsy toy ny Candy hanorotoro sy Papa poara Iny resabe iny dia misy sisa tavela moves in Pet Rescue Iny resabe iny dia tsy mahazo nivadika ho hevitra tombony raha ny tanjona dia vita, indray mandeha dia voavonjy ny biby fiompy sy ny hevitra tanjona dia nihaona izany no end..thankyou for mitendry, mifindra tsara miaraka izao! so if you really want to earn those three stars I suggest you work your last pet to the bottom and sit it on top of a fail proof group of blocks that you can clear with your very last move or if you have a firecracker to use you can always go with that.
Mandondòna ny vato eny! – Metal boxes are pains in the neck! tehaka ho zava-dehibe fa! misy afa-tsy fomba roa ny hanaisotra azy tsy ho solaitrabe ny; mitsoka azy ireo na misy mandondona azy tokoa. Amin'ny fampiasana ny baomba dia afaka hikarakara ny boaty efatra amin'ny fotoana, na miezaka ny handao azy ireo teo an-tampon'ny andry iray ho tipped eny indray mandeha teo amin'ny varavarana lamba manosika. Tsy misy zavatra hafa mahakivy noho ny miady ny lalanao ka hatrany ambany mba hahita anareo ihany no manana mahafatifaty sy malefaka mihantona ny amin'ny boaty!
General Pet Rescue hamantatra izany sy ny tendron'ny ravin, 7.5 out of 10 based on 2 ratings